Kuita munhu mubhizinesi redhijitari | ECommerce nhau
“Ongororo ichangoburwa yakaratidza kuti 62% yemabhizimusi edijitori atove nematurusi ehunhu ari munzvimbo dzakadai sekuyedza, kuita hunhu kana hunhu hwevashandisi kuitira kuti ruzivo rwevatengi ruwedzere. Kubudikidza nekugara uchigadzirisa ndipo panogona kuita kuti bhizinesi riwedzere kusimuka ", akadaro Christian Hoffmann COO uye mubatsiri pamwe chete weSingular Cover, mutangi wekuSpain wekutanga kumabhizimusi, maSME nevanozvishandira.
Mune ino mamiriro akapararira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kugadzirisa mune rakakosha bhizinesi kunogona sarudza kubudirira yeaya ane hunyanzvi zviitiko zvehunyanzvi. Nekuti mukuita, ivo vanogadzira yakakosha sosi yekuvandudza mukushambadzira kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa. Kubva kuhurongwa hwekutengesa hwakagadzirirwa yako zvido zvehunyanzvi.
Saka kuti iwe ugone kuunza iwo kubhizinesi rako kana chitoro chedigital, isu tiri kuzokupa iwe zvimwe zveakanakisa zvirevo zvinoenderana nekuzvimirira mumabhizimusi edhijitari. Izvo hazvibvi munzira dzakafanana, asi zvinopesana, zvinobva munzira dzakasiyana dzakasiyana dzekunzwisisa bhizinesi repamhepo. Sezvauchaona pazasi:
1 Strategy mune bhizinesi kugadzirisa
2 Ndeapi matanho angaitwe?
3 Kubudirira kwezvirongwa zvakagadziriswa mukambani yedhijitari
Strategy mune bhizinesi kugadzirisa
Kuita iyi tambo yezviito pasina mubvunzo kuchakubatsira iwe kubva zvino kuti ubudirire mune rako ruzivo rwekunakidzwa. Kune zvimwe zvikonzero zvatiri kuzokutsanangurira kwauri kubva zvino zvichienda mberi:
Inokupa iwe nematurusi anodiwa kuti usiyane neako bhizinesi uye uswedere pamakwikwi mukati mebhizimusi rako chikamu.
Zano rakagadzirirwa kune rako bhizinesi zvido ndiyo yakanakisa nzira yekupa yako mutsara webhizinesi zvakanyanya kuoneka. Kunyanya, kune iro rekupa simba kana ichienzaniswa nemamwe makambani mune imwechete mutsara webhizinesi.
Icho chiitiko chinodiwa zvakakwana kuti uwedzere bhizinesi rako, zvirinani mune yayo e-commerce yekutanga maitiro.
Zvakare nekukosha kwayo kukuru kuita zviito zvakajairwa uye izvo zvinofanirwa kusiyaniswa kubva kune mamwe mabhizinesi ari mubhizinesi rimwechete rebhizimusi.
Iyo ndeimwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzauinadzo panguva ino yekusvika kuwanda kwevatengi kana vashandisi nekuti iwe unoteedzera kurapwa neizvi chokwadi yakagadzirirwa zvaunoda.
Kutakura à la carte chirongwa cheiyi kirasi yemakambani inogadzira izvo mabhenefiti anowedzera zvishoma nezvishoma. Kunyanya, iine zvakanaka kwazvo mhedzisiro muchikamu chekutanga cheichi chiitiko mudhijitari chikamu.
Ndeapi matanho angaitwe?
Mumwe wemibvunzo yauchazvibvunza kubva ikozvino mitsara yezviito zvaunogona kuita kusimudzira chitoro chako kana zvemagetsi zvekutengeserana. Ehezve kune akawanda uye akasiyana hunhu uye kubva pane iyi nzira isu tiri kuzokufumura iwe zvimwe zvakakosha zvakanyanya zvaunogona kushandisa kubva zvino zvichienda mberi.
Yekutanga inoenderana nekugadzira iyo yakadzama nhoroondo pane zvekutengeserana zvinhu zvinoratidzwa nevatengi vako vakuru kana vashandisi. Nechinangwa chekusimudzira kurapwa kunoenderana nehunhu hwavanopa kusvika ipapo.
Simbisa zvinhu zvaro zvakanaka kwazvo kuitira kuti nenzira iyi zano rekutengesa rigoiswa mukugadzira kugadzira iyo kubatana kwemubatanidzwa yakaita nevanhu ava.
Edza kuona kana vatengi vane zvinongedzo kunzvimbo dzekudyidzana kufambisa kubatanidzwa kwayo mudenderedzwa kana maforamu ekambani yako yedhijitari.
Kana iwe uchida, chokwadi chekuti rakagadzirirwa rakagadzirwa zano rinogona kushanda zvakanyanya kuzadzisa zvinangwa pamberi penguva kunogona kubatsira. Kusvika padanho rekuti iri zano rinoshanda kwazvo kana rakanangana nepfupi kana kunyange yepakati izwi.
Kubudirira kwezvirongwa zvakagadziriswa mukambani yedhijitari
Kana iwe uchida kuziva mipiro inogadzirwa neiyi nzira yekutengesa, hapana zvirinani pane kuenda kumhedzisiro yekuitwa kwayo. Kwete zvisina maturo, iwe unowana mhedzisiro yekuziva mhedzisiro inogona kubatsira zvakanyanya mukuvandudza kwako kwehunyanzvi chiitiko kubva ikozvino zvichienda mberi: Unoda kuziva zvimwe zvakakosha here? Zvakanaka, nyatsoteerera nekuti zvichave zvakakosha kuti uzvipinze mubhizinesi rako.
Chekutanga pane zvese iri zano mukushambadzira kwedigital pachedu pachedu uye izvo zvinoshanda zvinoenderana nezvinodiwa zvako chaizvo mubhizimusi munda. Saka kuti zvishoma nezvishoma zvinangwa zvako zvizadzikiswe nenzira inoshanda uye yakaenzana, panguva imwe chete iyo iri pakupera kwezuva chimwe chezvinangwa zviripedyo zvaunazvo pamberi pako panguva ino.
Kuburikidza nemipiro miviri inogona kubatsira zvakanyanya kutsanangura zvinonyanya kutsvakwa-zvibodzwa muhukama hwebhizinesi rako kana chitoro chepamhepo. Semuenzaniso, mune anotevera zviito zvinoburitswa pazasi:
Iwe unofanirwa kuongorora kukosha kwekuva nekambani blog panguva ino. Inogona kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako nekukurumidza uye nyore nzira.
Mune imwe nzira, kuvapo kwechiratidzo chako chekutengesa mumasocial network kunokosha kuti upinde panotamira vatengi vako kana vashandisi.
Ehezve, pasina kurumbidza, hapana mubvunzo kuti iwe uchave nenzvimbo yakawanda inowanikwa kuti uvandudze mhedzisiro yekambani yedhijitari yeyedu pfuma. Iko kumwe kwekuongorora kunofanirwa kutariswa kwakanyanya ndiko kunoreva kuti ndeupi mutsauko uripakati pechirongwa chehunhu uhu chaunogona kukupa iwe ne kushanda kuchakubhadharira zviise mukuita kuita izvi.
Iyo equation inosanganisa zvese zviri zviviri ichave iri mhinduro yakanakisa kune zvido zvekambani yako yedhijitari uye iwe unogona kuzviwana kubva zvino zvichienda mberi. Mune chii chinofanirwa kuve chimwe chezvinhu zvako zvekutanga mumunda wekushambadzira bhizinesi uye yakakodzera nguva yedu. Kwete pasina, pane zvakawanda zvakanaka izvo zvinofanirwa kukuunzira iwe kubva panguva ino uye kuti iwe uchazviona zvishoma nezvishoma, uye kwete kamwe kamwe sezvaungatenda kubva pakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kuita munhu mubhizinesi redhijitari
Maitiro ekudzorerazve vatengi kuvimba